Ogaden News Agency (ONA) – Dakaatirada Jaamacadda – African International University – oo ka hadlay qadiyadda Ogadenya
Dakaatirada Jaamacadda – African International University – oo ka hadlay qadiyadda Ogadenya
Jaamacadaha waxay ka mid yihiin goobaha ay siyaasiyiinta maanta iyo kuwa mustaqbalkaba ka helaan xogta ay uga baahan yihiin dalalka iyo shucuubta kala duwan ee caalamka ku dhaqan. Sidaa darteed ardayda S.Ogadenya ee jaamacadaha caalamka wax ka dhigta gaar ahaan asaaskii OYSU ka dib waxay ku mashquulsan yihiin sidii nadwooyin lagaga hadlayo qadiyadda Ogadenya loogu qaban lahaa ardayda iyo Profesoorada Jaamacadaha kala duwan.
Waxaa 17kii bishan lagu qabtay Jamacada AIU qaybta cilmibaadhista arimaha Afrika dood cilmiyeed looga hadlayay xaalada Ogadenia laga soo bilaabo qarnigii 16aad ilaa waqtigan xaadirka ah, waxaana soo bandhigay nadwada oo ka hadlay 5 dictoor aa kala ah;
1- Dr. Muuse Al-Amiin oo ku tkhasusay cilmiga Juquraafiga
2 Dr. Jamaal Cabdiraxmaan oo ku takhasusay cilimiga siyaasadda ahna ciidanka dalka sudan
3- Ustaad Caasim Fadxuraxmaan
4-Dr. Zamzami Bashiir
5-Dr. Cabdil wahaab oo ku takhasusay Arimaha Itoobiya
Waxyabaha ay ka hadleen waxaa ka mid ahaa Juquraafiga Ogadenia iyo cimiladiisa, Siyaasada Ogadenia xagga ciidanka, dhaqaalaha . Waxaa ka mid ahaa hadaladii Prof.ada in shacabka Ogadenia maalin kasta ay dhintaan 120 qof kuwaasoo ay dilaana ciidamada Itobiya iyagoo sheegay inay cuna-qabatayn saarantahay Ogadenia dhinac walba taban haysa mid dhaqaale mid saxaafadeed mid bini aadminimo, ayna kala xidheen dalka Ogadenia gudahiisa oo magaaalo magaalo kale ayna u gudbi karin.
Waxaa kaloo ay xuseen in shacabka Ogadenia ay u gyastaan ciidamada Itoobiya kufisi, boob, dhaca, dil, xidhay iyo argagixisanimo. Dhibka lagu hayaana ma aha mid sanadkan ama bishan bilaabatay oo dhamaatay ee waa mid jira saacadan aan ku jiro. Waxaa ay sheegeen laga soo bilaabo weerar kii COBOLE ilaa mantana in kufsiga, boobku hantida shacabka, dilka uu intaba kumam yaal kor u dhaafayo iaydoo lagu beerayo shacabka cudurada khatarta ah sida AIDSKA oo kale taas oo ay xukuumadihii kala dambeeyay ee itoobiya ay iskaga mid ka ahaayeen.
Waxay intaas ku daraeen oo kale in Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia ay haysato dhulka ogadenia 75% , Itoobiyana ay magalooyinka waawayn oo kali ah joogto halka ay JWXO-na ay tahay jabhada kaliya ee matasha shacabka Ogadenia ee ka dagaalanta dhulkaas taas oo buu yidhi Dikrtoorkii ka hadlayay ay iskudayday dawlada Itoobiya in ay ururada argagixisanimada ku darto uyadoo samaysay Itoobiya malayshiyaadu daacad ah oo fulinaya falal argagixisinmo ah.
Waxay intaas kudareen in shacabka Ogaden uuna waligii raali ka noqonin gumaysiga, waana inuu helaa shacabka Ogadenia doonitaankiisa ama xaqiisa caalmankana waxaa wajib ku ah inuu ka hadlo arimaha ka socda Ogadenia una gargaaro shacabkaas oo aan helin fursadiisa, iyadoo caalamka islaamkana uu ka jeedsaday arimaha Ogadena. Wuxuu xusay in shacabka Ogadenya aanay ka faiidaysanin warbaahinta casriga ah iyagoo aanan aqoonin shacabka Ogadenia facebook, ama Intenet iyo aaladaaha lagu kiciyay shucuubtii carabta iyadoo uu ka xarimay gumaysiga haysta.
Waxay soo bandhigeen in Ogadenia tahay goob istiraatiji ah oo dhaqaale xoogan leh sida gaaska, macaadanta kale, wabiyada dhex mara Ogadenia waxa uu quudin karaa malaayiin qof, iyadoo 95% dhaqaalaha Somaliyana uu ka yimaado Ogadenia sidaas darteed ayay Itoobiya u ilashan haysaa waddankan, mana rabto Itoobiya inay dhalato dawlad somaliyeed oo siagarab taagta Ogadenya.
Ugu dan bayntii waxaa lagu wareejiyay micra foonka Dr. Cabdi majiid oo ahaa nin kii marti galiyay NADWADA aadna ugu mahad naqay ardayda Ogadenia ee soo qabanqaabisay dood cilmiyeedkan taasoo ku dhamatay farxad iyo dareen sigaar ahna u samayn haysay ardaydaa S.Ogadenia ee Sudan wax ka barata.
ruunti wa arin lagu farxo,sida dhalinyarada reer ogadenia, eey ugu dadlayan iney calamka tusan,dhibka ka tagan dhulkodi hooyo.
hadal badan han mabuxshe,,waxan ini leyahay congratulation. may Allah Bless You All.
waa guul u soo hoyatey shacabka reer Ogaadeeniya,
ardayda reer Ogaadeeniya ee Suudaan jooga Guulaysta siina giijiya
……..wallayaal dhamaantiin inta kufarax san guushan iyo dhamaan ururka dhalinyalarada reer ogadeenya OYSU khaasatan mujaahidiinta jamicadda suudaan dhigata waad nahad san tihiin waxaan idin leenahay waa waajib inaga saaran dalkeena iyo dalkeenaba ……..
in badan oon garanayo ayaan sawirradooda arkaaa waa dhalin yaradii herer iyo jig jiga ka tagvtay ilaa2000 marlabaadna waan idin salaamayaa dhamaan tiin guulaysta alle garab kiina ha jireee
guuuuuuuuuuul guuuul guuuul